दुरूस्तै मेस्सीजस्तै देखिने व्यक्तिः मेस्सी हुँ भन्दै ढाँटेर २३ महिलासँग ‘सम्बन्ध’ राखेको आरोप – Kavrepati
Home / खेलकुद / दुरूस्तै मेस्सीजस्तै देखिने व्यक्तिः मेस्सी हुँ भन्दै ढाँटेर २३ महिलासँग ‘सम्बन्ध’ राखेको आरोप
दुरूस्तै मेस्सीजस्तै देखिने व्यक्तिः मेस्सी हुँ भन्दै ढाँटेर २३ महिलासँग ‘सम्बन्ध’ राखेको आरोप
admin August 27, 2021	खेलकुद Leaveacomment 91 Views
नेपाललाई उपाधिबाट वञ्चित गर्न मलाई कारबाही गरियो: अल्मुताइरी
२० वर्षपछि हारको ब’दला लियो नेपालले, मैदानमै ध’रधरी रोए बंगलादेशी खेलाडी
इरानका २८ वर्षका यी युवा दुरुस्ती फुटबल स्टार लियोनल मेस्सी जस्तै देखिन्छन्। उनको सामाजिक सञ्जालमा लाखौांके फलोअर्स छन् । उनी इरानका रेजा पारास्तेस हुन्, उनलाई देखेर मेस्सीका प्रशंसक झु’क्किन्छन् ।
मेस्सीजस्तै देखिने भएकाले उनी रातारात सामाजिक संजाल इन्स्टाग्राममा चर्चित बने। मेस्सीको पहिचान लिएर उनले थुप्रै लाभ लिए । सन् २०१४ देखि इन्स्टाग्राम चलाउन थालेका उनी सन् २०१७ देखि सबैले चिन्ने भएका थिए, मेस्सी जस्तै देखिने भएकाले उनलाई सबैले फलो गरे ।
दैनिक सयौंले उनीसँग यतिबेला तस्बिर खिचाउँछन्। हाल उनको इन्स्टाग्राममा ११ लाख फलोवर छन्। उनका पिताले आफ्ना छोरा पारास्तेस मेस्सीजस्तै लागेपछि उनलाई मेस्सीको जर्सी लगाउन भने कपाल र दा’ह्री मेस्सीकै जस्तो समेत बनाउन लगाएका थिए।
त्यसपछि दुरुस्तै मेस्सी देखिएपछि उनको चर्चा चु’लिएको हो। सामाजिक सजालमा धेरै फलोअर्स कमाए भने मेस्सीकै नामवाट गलत काम गरेको पनि प’र्दाफास भएको छ । सन् २०१९ मा उनीमाथि ग’म्भीर आरोप लागेको छ । उनले मेस्सीको नाम दु’रुपयोग गरेर महिलाहरुसंग सम्बन्ध राखेको आरोप लागेको छ ।
उनले मेस्सी हुँ भन्दै २३ महिलासँग ढाँ’टेर शा’रि’री’क स’म्बन्ध बनाएको समाचारहरु आए। तर इ’रानी प्रहरीले छानबिन गर्दैजाँदा त्यो समाचारहरु झु’ठो भएको पत्ता लाग्यो। रेजा पारास्तेसले पनि आफूले कहिल्यै महिलाहरुलाई न’ढाटेको स्पष्टीकरण दिएका थिए।
Previous हिजो कस्तो थिए आज यस्तो बिजोग अ’वस्था ६ बर्षिय बाबु , आखिर के भयो यस्तो ? (हेर्नुस् भिडियो)
Next पाथिभरा माताले सबैको मनोकांक्षा पुरा गरुन, भाद्र १२ गते शनिबार, आज तपाईको भाग्य कस्तो छ हेर्नुहोस राशिफल
मेसीको घर माथीबाट जहाज उडाउन किन पाइदैन ? यस्तो छ वास्तविकता
एजेन्सी । अजेन्टिनाका चर्चित स्ट्राइगर लियोनेल मेस्सी फिफा विश्वकपको सेरोफेरोमा ब्यापक चर्चामा छन् । आइसल्याण्डसँग …